Osisi na-atọ ụtọ na Australia
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmanya & mmuo » Osisi na-atọ ụtọ na Australia
Akụkọ na -agbasa Australia • Na-agbasa News Travel • culinary • News • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche • Mmanya & mmuo
Na-achọ ụzọ dị mfe ma dị ụtọ chọpụta Australia? Enwere m ike ịtụnye inweta iko mmanya, ịgụ ihe ndetu m, na ịchọpụta ọmarịcha Australia site na ịppingụ mmanya ole na ole.
Mmanya site Imewe
Australia bụ obere kọntinent, mana obodo nke isii kachasị ukwuu, obere ntakịrị karịa kọntinent USA. O nwere ugwu ndi snow kpuchiri, ala akọrọ, oke osimiri, na oke ohia - ya na pere mpe nke ala kwesiri ekwesi.
Ọtụtụ ebe mmanya na-eto mmanya dị na nsọtụ ndịda nke kọntinent ahụ. E nwere mpaghara mmiri dị n'ụsọ mmiri na mpaghara a dabara maka Pinot Noir na Chardonnay. Mpaghara ndị ọzọ, n'ime ime obodo, zuru oke maka Shiraz. Ejiri mpaghara mmiri ozuzo dị nso na Adelaide Hills mara maka Riesling, Pinot Noir na Chardonnay. Mpaghara ọzọ dị na ndagwurugwu Barossa na-emepụta Shiraz na ya site na ala mmiri na-enweghị mmiri na mmiri.
Ọ dị mkpa maka akụ na ụba
Fọdụ ndị amaghị na Australia ewepụtala ụlọ ọrụ mmanya na-asọmpi nke ọma na mba ụwa. N'ihe banyere 2019, obodo ahụ nwere 146,128 ha n'okpuru osisi vaịn, nke Shiraz na-achịkwa 39,893 ha (30 percent) na Chardonnay, nke kachasị ọcha dị iche iche, yana 21,442 ha (16 pasent) nke ahịa ahụ. E nwere ihe dịka ụlọ mmanya 2468 na ndị na-akọ mkpụrụ vaịn 6251 na-eji ndị ọrụ 172,736 n'ọrụ oge zuru oke na mpaghara 65 na-eto eto mmanya, na-enye onyinye ihe karịrị ijeri $ 40 kwa afọ na akụ na ụba Australia.
Winelọ ọrụ mmanya nke Australia bụ onye nke ise kachasị na-ebupụ mmanya na mba ụwa - na-ezigara ihe dịka nde lita 780 kwa afọ na mba ndị ọzọ na-a mostụkarị mmanya na New Zealand, France, Italy na Spain; odika 40 percent nke mmepụta na-ere ụlọ. Ndị Australia na-a overụ ihe karịrị lita 530 kwa afọ na-eji ihe ọ ofụ capụ na-eri lita 30 (pasent 50 mmanya ọcha, pasent iri atọ na ise mmanya mmanya).
Wineries Na-amalite, Kwụsị ma Bido Ọzọ
Na narị afọ nke 18, osisi vaịn rutere Australia n'ihi mbọ nke Gọvanọ Arthur Phillip (1788) onye kpọtara ha na ahụhụ ntaramahụhụ site Cape nke Good Hope. Mgbalị ndị mbụ nke ịme mmanya na-akụ afọ n'ala mana n'ikpeazụ, ndị ọbịa ahụ chọpụtara ihe ha mejọrọ (ihe dị mkpa bụ ọnọdụ), mmanya wee bụrụ maka ire ere na 1820.
E guzobere winery mbụ na 1828 (Wyndham Estate) ma bụrụ ebe amụrụ maka Australia Shiraz. Gregory Blaxand bụ onye mbụ mbupụ Australian wine na mbụ winemaker merie ọla ọcha ọla edo nke Royal Society of Arts (1823) na London.
Mkpa mmanya dị na akụ na ụba Australia nọgidere na-abawanye na 1830, e guzobere ubi vaịn na ndagwurugwu Hunter. Na 1833 James Busby, nke akpọrọ dị ka nna ụlọ ọrụ mmanya na Australia, weghachitere nhọrọ mkpụrụ vaịn dị iche iche gụnyere mkpụrụ vaịn French mbụ na mkpụrụ vaịn maka ịmịpụta mmanya siri ike mgbe ọ gara Spain na France. John Barton Hack mepụtara otu ubi vaịn na Echunga Springs, nke dịdebere Ugwu Barker, na 1843 zigara Queen Victoria, mmanya mbụ nke mmanya Ọstrelia na eze England.
Dika otutu ndi mmadu bi na Europe rutere mmanya ndi di nma. Ndị kwabatara na Prussia (etiti 1850s) guzobere mpaghara mmanya South South Barossa ebe ndị na-a winụ mmanya si Switzerland guzobere mpaghara mmanya Geelong na Victoria (1842). Gụ akụkọ zuru ezu na WINES.TRAVEL.